August 10, 2018 + Nri na ihe ọṅụṅụ, German, Germany, Isi akwukwo, Ezi ntụziaka
Ezigbo German Sauerbraten
Otu n'ime ebe kachasị mma ná mba ọzọ iji rie nri bụ Germany. Ihe niile dị mma. Ọ niile bara ọgaranya, na-atọ ụtọ, ma na-atọ ụtọ ọbụna mma na a kpochapụwo biya German. Otu n'ime ọkacha mmasị German anyị bụ ezigbo Sauerbraten. Isi ihe na-enye ezigbo nchekwa dị na marinade. Ị ga-achọ ọ dịkarịa ala abụọ, mana ọkacha mma ụbọchị atọ iji mee ka anụ ahụ gwọọ maka uzommeputa. Ọ bụrụ na ị ... GỤKWUO